Ngwa Nnwale Mingwang - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Companylọ ọrụ anyị nwere ụdị nnwale ọkachamara ọ bụla
Ndepụta Melt Flow na -atụkwa gram ole nke polymer na -agabiga n'elu. Ọ na -ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọrụ plastik. A na -edekarị ihe ngosi na -agbaze agbaze na mpempe akwụkwọ data nke ihe ọkụ. Ihe nrịba ama na-agbaze agbaze bụ ngwaọrụ kachasị ewu ewu na ụlọ ọrụ plastik iji chọpụta viscosity nke ihe onwunwe, a na-ejikwa ya iji nwalee ịdị n'otu na otu.
Black carbon (graphite) bụ otu n'ime ihe mgbakwunye plastik kachasị ewu ewu ọ bụghị naanị n'ihi na ọ bụ ebe dị ọnụ ala maka ụcha ojii kamakwa n'ihi na ọ na-enye ezigbo ihe eji arụ ọrụ yana iguzogide ikuku-ikuku. Ya mere, ịtụle ọkwa ọdịnaya ọdịnaya carbon dị mkpa ka ijigide njikwa plastik.
ASTM D1603 na ISO 6964 na -ewepụta usoro ọkọlọtọ maka ịtụle ọdịnaya carbon carbon na ihe olefin na PE ọkpọkọ n'otu n'otu.
Kpọmkwem, ụzọ nnwale na -akọwa mkpebi siri ike nke carbon carbon na polyethylene, polypropylene, na polybutylene plastic. Ngwa a na -eji arụ ọrụ bụ igwe ọkụ ọkụ na -etinye ụgbọ mmiri ọkụ n'ime ya.
Na mbido, a na -ewe iwe ọkụ na 550 °C iji gbaa polymer ọkụ ka ọ dekọrọ tupu na mgbe usoro a gasịrị. N'ikpeazụ, a na -ekpo ọkụ ihe fọdụrụ na 900 °C ruo mgbe ihe ọkụkụ carbon niile na -ere ọkụ, emesịa ajụkwa ya ma tụọ ya.
Dripper Flow Tester nwere ike nwalee ụdị ngwaọrụ ọ bụla na-ewepụta ihe site na ọkpọ mmiri mmiri na teepu na-amị mmiri na mpempe akwụkwọ ntanetị, ndị na-efesa ya na ọbụna ndị na-etinye mmiri n'ime.
Iji sel ibu iji tụọ mmiri anakọtara na -enye ohere izi ezi oke nke ịlele oke n'ime obere oge enwere ike. Anyị na -eme nke a site na ikwe ka anwale ihe nlele 10 n'otu oge n'otu nrụgide.
The Flow Tester bụ ISO 9260 na ISO 9261 kwekọrọ. Dayameta nnwale ọkọlọtọ sitere na 12-25 na ndị ọzọ dị mgbe achọrọ. Enwere ike ịnwale ule n'ụzọ zuru oke ruo ihe ruru ugboro 30 nke nrụgide. Nnwale nke ọ bụla na -ewepụta akụkọ nke gụnyere eserese na nyocha ọnụ ọgụgụ dị ka onye na -akọwa ihe na CV.
Nnwale uru CV & CU
Nnwale Nguzogide Ihu Igwe